VaTrump Votsvagira Maseneta eBato Ravo Rutsigiro kuGeorgia Asi VaChigunun'una Kuti Vakabirirwa Sarudzo
Mutungamiri wenyioka yeAmerica VaDonald Trump
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump neMugovera vakaenda ku Valdosta, Georgia kunobatsira kutsvagira rutsigiro vari kukwikwidza vakamirira bato remaRepublicans musarudzo mbiri dzakakosha zvikuru dzedare reSenate.
Vakamirira maRepublicans ndiVaDavid Perdue naAmai Kelly Loeffler. Vakamirira maDemocrats ndi VaRaphael Warnock naVaJon Ossoff. Sarudzo idzi dziri kuitwa musi wa5 Ndira uye bato rinokunda ndiro rinenge rotonga mudare reSeneti.
MaRepublicans parizvino ane zvigaro makumi mashanu uku maDemocrats aine makumi mana nesere. MaDemocrats akakunda zvigaro zviviri izvi zvinoreva kuti mapato anenge aine zvigaro zvakaenzana zvichipa mukana mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Kamala Harris simba rekuvhota zvinozobatsira maDemocrats.
Kunyangwe VaTrump vakakundwa mudunhu re Georgia iri nevakasarudzwa kutungamira nyika VaJoe Biden nemavhoti zvuru gumi nezviviri, VaTrump vari kutsika madziro vachiti vakakunda uye sarudzo dzakabirirwa.
VaBiden ndivo mutungamiri webato ravo abudirira musarudzo dzekuGeorgia kubva muna 1992. Vasati vaenda kuGeorgia, VaTrump vakafonera gavhuna wedunhu iri VaBrian Kemp kuti vakururudzira nhengo dzedare ravo kupikisa zvakabuda usarudzo asi VaKemp vakatsika madziro.
Nyaya yaVaTrump yekuti sarudzo dzakabirirwa asi vasina humbowo inonzi nevamwe mubato iri vakaita seimwe shoroma inobatsira bato iri VaDan Eberhart zvave kukanganisa chimiro chebato uye zvinogona kukanganisa vari kumirira bato ravo muGeorgia.
Asi vamwe vakaita sechipangamazano chemutauriri wedare reSenate vari kubato remaRepublicans, VaMitch McConnel, VaJosh Holmes vanoti hapana humbowo hwekuti vatsigiri vavo vacharegera kunovhota.
Kushanya kwaVaTrump kuGeorgia kuri kuuya apo dunhu reCalifornia rakavhota kutambira zvakabuda musarudzo zvichireva kuti VaBiden vakabva vasvika mavhoti anodiwa kutungamira nyika kana kuti 270 Electoral College votes.
Asi vasati vatora mhiko musi wa 20 Ndira gore rinouya, Matunhu ose achasangana musi wa14 Zvita achivhotawo kazhinji vachingotevera zvakabuda musarudzo. Musi wa 6 Ndira, dare reCongress richangosarudzwa dzinovhotawo zviri pamutemo nekudoma mutungamiri wenyika mutsva zviri pamutemo.